Kabaha Dhalada ah, Jack Dhererka, Garage Jack, Jack Stand - Jiaye
la iskula dhexmaro Power Jack
Joogsiga & Taageerada Mashiinka
Jirka Hawada Hawada Hawada
Qalabka Dayactirka Baabuur ee ATV & Baaskiil
Gawaarida Gawaarida Dollar & Gawaarida Jack
Haiyan Jiaye Qalabka Qalabka Co., Ltd. waxaa la aasaasay 2003-dii. Waxaan xirfad u leenahay soo saarista iyo iibinta aaladaha kor u qaada ee kaladuwan: qalabka hawo maareynta, qalabka dayactirka baabuurta, aaladaha dayactirka mootada, iyo aaladaha kale ee gawaarida. Waxaan ku guuleysanay Aqoonsiga Hubinta Tayada ee ISO9001 iyo alaabooyinka badankood waxay leeyihiin shahaadada CE. Badeecadeenna waxaa loo dhoofiyaa adduunka oo dhan. Sannadihii horumarka, hadda waxaan noqonnay cilmi-baaris, sahamin, soosaarid iyo ganacsi wadashaqeyn dibadda ah.
Aaminaada shirkadeena waa “tayada koowaad, hal abuurka farsamada, adeega wanaagsan, iyo gaarsiinta deg degga ah”. Hadafkayagu waa inaan abuurno nooc heer sare ah, wax soo saaris heer sare ah iyo adeeg heer sare ah oo ka dhex jira tartamayaasheena.
Jaangooyaha Caagga ah ee Jack BJ0201
Jawhar Jack FL0205
Jack istaagga JS0210
Ereyadu waxbadan bay kuu sheegi karaan. Fiiri maktabadan sawirada si aad uga aragtid Haas dhinac kasta.
Samee Xitaa Ka Badan
Laga soo bilaabo kontaroolka ugu caansan ee macaamiisha warshadaha, ilaa Nidaamkeena hal-abuurka ee Wireless Intuitive Probing System (WIPS), illaa xulashada ballaaran ee xawaaraha iyo qalabka wax beddela, waxaan kuu oggolaaneynaa inaad ku hagaajiso mashiinkaaga si ay adiga kuu shaqeyso. Ka dib oo dhan, waad ogtahay waxa aad ugu baahan tahay qofkasta. Baro wax badan oo ku saabsan wax kasta oo Haas ay bixiso.
Dhis Mashiinka Furkaaga
Diyaar ma u tahay inaad abuurto Haas cusub oo taagan? Aynu u helno mashiinka saxda ah ee dukaankiisa, oo aan ka dhigno adigu adiga oo ku darin xulashooyinka iyo astaamaha adiga kuu shaqeynaya. HALKAN HOOSE KA DHAGEYSO
Haydarooliga Garage Jack 3ton , Car Creeper , 3ton Haydarooliga Garage Jack , Tools Repair , Haydarooliga Garage Jack , Aaladda Gawaarida,
Adress: No.699 Wadada Yintan, Soonka Haiyan Horumarinta Dhaqaalaha, Jiaxing, Gobolka Zhejiang
Qalabka jaakadaha kala duwan ee loo yaqaan 'hydraulic jack'
Jaangooyaddan kuma xirna gaariga ...
Hadda milkiilayaasha baabuurtu dhab ahaan maahan ...